I-Website Scraping Tools Ukukhupha Zonke izixhumanisi ezivela kwi-Page - Iseluleko se-Semalt
Ukukhupha izixhumanisi kumaphepha ewebhu kuye kwaba nzima. Uya kufuneka ukopishe iifowuni ezifunayo nganye, kwaye iyanelisekile kwaye iyakhawuleza. Nangona kunjalo, kukho iiprogram ezisekelwe kwiwebhu ukususa zonke iinqununu kwiiwebhusayithi ezifunayo kunye neeblogi ngaphandle kokuphuma. Inxalenye ephambili kukuba le nkqubo inokudibaniswa ne-IE, Firefox, Chrome, kunye ne-Safari.
1. I-IWebTool Link Extractor:
IWebTool I-Extractor iyisistim eyaziwa kwiwebhu kunye nesandiso se-Firefox. Kuya kunceda ukukhuphela idatha yakho ngqo kumatshini wakho. Emva kokuba ifakwe kwaye isebenze, le nkqubo iya kwenza ukuba inkqubo yokuqhafaza ibe lula kwaye ifake. Ukukhipha idatha kwiivenkile zamaphephandaba, ii-portals zokuhamba kunye namaziko okutshintshiselana kwamasheya akuzange kube lula. Ngeli software, unokwenza imisebenzi eninzi ngaphandle kokuphuma. Ivumela izicelo ezintlanu ngeyure kwaye isixhobo saziwa ngokusebenza kakuhle. Ezinye zeendlela zayo ezikhethileyo ziyiNtloko kunye ne-anchor text button kunye nekhetho le-Google Page-Rank.
2. Qhagamshelana ne-Extractor:
3. Ingxelo ye-FireLink:
Akusiyo kuphela i-Firefox add-on kodwa iprogram esebenzayo yewebhu. Ichonga iziqulatho kunye neenkcukacha zedatha kwiivenkile zamaphepha, izibonelelo ze-RSS, ii-blogs kunye neefayili zeendaba zentlalo ngaphandle kokuphuma. Inika iinketho zokucoca idatha ngokusekelwe kwiipropati zayo kunye neemfuno zakho. Umbiko we-FireLink usebenza ngokuskena iikhonkco kunye nokuhlaziya iifasethi.
4. I-SEM Ikhonkco: Umncedisi:
Ngenye yeenkqubo ezilula kwaye zilungele ukukhupha zonke iikhonkco kwiphepha lewebhu. Ideshibhodi yayo ebonakalayo iya kwenza inkqubo yakho yokukhipha ibe lula kwaye ilula. Enoba ufuna ukukhangela idatha kwiinkcukacha ezilula okanye ukuqhuba iiprojekthi ezilandelelanayo zokulandelela iinkcukacha, le nkqubo iya kuyenza yonke into ngaphandle kwakho.
5. I-Extrait ye-SEOquake Link:
I-SEOquake Link i-Extractor enye yesicelo esisewebhu. Akufuneki ukulandwa, kwaye unokufumana inzuzo kwi-intanethi. Ikunceda ukukhupha zonke iinqununu ukusuka kwiphepha elithile lewebhu kwaye ukhupha kwaye ulanda idatha yenkcazelo yangempela. Oku kuya kubonisa ubutyebi bezonxibelelwano kwifom yewebhu yewebhu yeGoogle kunye namaphepha ebhukumisiweyo.
6. I-OutWit Hub Link I-Extractor: